Ethopia: Itoobiya oo Masar iyo Eritaria ku eedaysay rabshadaha waddanka ka socda - Wargane News
Home Somali News Ethopia: Itoobiya oo Masar iyo Eritaria ku eedaysay rabshadaha waddanka ka socda
Ethopia: Itoobiya oo Masar iyo Eritaria ku eedaysay rabshadaha waddanka ka socda
Itoobiya ayaa ku eedeysay Masar iyo Eritrea inay qayb ka qaateen rabshadihii ka dhacay waddanka, oo lagu soo rogay xaalad degdeg ah Axadii.
Wasiirka warfaafinta Getachew Reda, ayaa sheegay in dad shisheeye ay hubaynayaan, tababarayaan ayna lacag siinayaan kooxaha mucaaradka, inkastoo aysan si rasmi ah uga haysan taageero dowladahooda.
Kooxaha xuquuqda bini’aadanka ayaa sheegay in boqolaal qof ay ku dhinteen mudaaharaadyo socday bilo oo looga soo horjeeday dowladda.
Kooxo ka tirsan Oromo iyo Amhara oo smayanaya mudaaharaadka ayaa sheegay inaysan qayb ku lahayn siyaadada iyo dhaqaalaha.
Wasiirka warfaafinta Itoobiya ayaa difaacay xaaladda degdegga ah ee dalka lagu soo rogay, wuxuuna yiro “kooxo dambiilayaal ah oo abaabulan ayaa rayidka bartilmaameedsanayay”.
Ciidammada federaalka ayaa dalkoo dhan la dhigay dibad baxyadiina waa la mamnuucay. Tallaabadan waxaa la qaaday mudo bilo ah oo mudaharaaddo dowladda lagaga soo horjeedo ay dhigayeen qawmiyadaha ugu waawayn dalka.
Dabaa deg diimeed
Xiisaddu waxay sii adkaatay wixii Axaddi ka dambeeyay ka dib markii ugu yaraan 55 qof ay ku dhinteen dibad baxyo laga dhigay goob dabbaal deg diimeed ay qawmiyada Oromadu ka dhigayeen.
Xaaladdan degdegga ah ee la soo rogay Axaddii waxay socon doontaa mudo lix bilood ah.
Tifaftiraha Afrika ee BBC-da, Mary Harper, ayaa sheegtay in mudaharaadadan rabshadaha wataa yihiin khatartii ugu ba’nayd ee soo food saartay xasiloonida Itoobiya mudo rubuc qarni ah gudaheed.
Wasiirka warfaafinta Itoobiya, Getachew Reda, ayaa Mary u sheegay in xaaladda degdegga ah loola jeeday in lagu mamnuuco bannaan baxyada. “Si loo dhawro xasiloonida dadweynaha dowladdu waxay garawsatay in ay daw tahay in si ku meel gaar ah loo joojiyo mudaharaadda” ayuu yiri, waxuuna intaa ku daray “qaska hubaysan ee ay wadaan kooxahan dambiileyaasha ah ee abaabulani ayaa lagu beegsanayaa xarumaha dowladda iyo kaabeyaasha dhaqaalaha ee muhiimka ah. Waxaanu haynaa caddaymo sugan oo muujinaya inay ka dambeeyaan dad aan doonayn in ay xukuumadda itoobiya ridaan e xataa doonaya inay gabi ahaan ba dalka Itoobiya afka dhulka u daraan.”
Waxa kaloo uu ballan qaaday in maamulka Itoobiya uu baaritaan ku sameyn doono eedaymaha ah in boolis iska dhigay diraysku laayeen dad shicib ah.
Bannaan baxyadan socday bilihii la soo dhaafay waxay ka dhasheen caro ay keentay isku day dowladdu ku doonaysay in ay dhul ku yaal gobolka Oromiya ay dan guud u qoondayso.
Dadka ololeeya ee ka tirsan qawmiyadaha Oromo iyo Amxaarada ayaa ka cawda in siyaasadda laga gacan bidixeeyay. Oromada iyo Amxaarada waa 60% bulshada ku dhaqan dalka waxaanay ka cawdaan in awoodu gacanta ugu jirto dabaqad yar oo ka tirsan qawmiyadda Tigray-ga.
War Deg Deg Ah: Qarax Imika KaDhacay Magaalada Muqdisho + Khasaaaraha Ka Dhashey
Somaliland: Wasaaradda Hawlaha Guud Oo Xalay Joojisay Dhismayaal Ganacsi Oo Ay Wasaaradda Waxbarashadu Dhisanaysay.
Somaliland: Muuse Biixi Oo Khudbad Qiimo Badan Ka Jeediyey Cafladii Caleemo Saarkiisa + Muuqaal
Somaliland: Taliyaha ciidanka Booliska Gobolka Sanaag Oo Ka Hadlay Dambiyadii Sanadkii Tagay Ee 2017-kii Ka Dhacay Gobolka Sanaag
Somaliland: Abwaan WEEDHSAME Oo Maanso Ku Cabiray Abaarta Ba’an Ee Ku Habsatay Dalka.